Nhengo dzeMDC-T Dziri Kupomerwa Mhosva yeKuponda Mupurisa Dzotsvagirwa Mari yeChibatiso.
Ndira 06, 2014
Zimbabwe opposition party Movement For Democratic Change (MDC) leader Morgan Tsvangirai addresses a news conference in Harare Sept. 18, 2013.
WASHINGTON — Magweta ari kumiririra nhengo dzeMDC-T nhatu dziri muhusungwa ave kurovana misoro kuyedza kuti vaone kuti vatatu ava vari kupomerwa mhosva yekuponda mupurisa inspector petros mutedza kuglen view muna 2011 vabuda mujeri sezvo vagarisamo.
Gore rapera, mutongi wedare repamusoro, vachinembiri bhunu, vakati dzimwe nhengo dzeMDC-T makumi maviri nepfumbamwe hadzina mhosva asi vakati vamwe vanomwe vatongwe.
Vakanzi vatongwe ava vanoti vatungamirai madzokere, muzvare yvonne musarurwa, valast maingehama, VaLazerus Maingehama, VaPhineas Nhatarikwa, VaEdwin Muingiri naVaPaul Nganeropa Rukanda.
Asi dare rakaramba kupa Muzvare Musarurwa, VaLast Maengahama, naVaMadzokere mukana wekubvisa mari yechibatiso. Muzvare Musarurwa naVaMaingehama vari kuChikurubi Maximum Remand Prison.
Asi Madzokere vari kuHarare Central Remand Prison. Magweta ari kumirira vasungwa ava, Amai Betrice Mutetwa, VaAlec Muchadehama naVaCharles Kwaramba, vanoti vari kugara pasi vachizeya kuti voenda kumatare here vachinokumbira kuti vasungwa ava vapihwe mukana wekubvisa mari yechibatiso, kana kuti okumbira dare kuti ritonge nyaya iyi nechimbi chimbi sezvo yave nemakore akawanda.
Mukupera kwegore dare reHigh Court rakaramba kunzwa chikumbiro chemari yechibatiso kana kuda kupa zuva richatanga kutongwa nyaya richiti vatongi varo vainge vachida kumbotonga nyaya dzesarudzo dzemuna Chikunguru dzairamba kutambirwa neMDC-T.
Vachuchisi vehurumende vanoti nhengo dzeMDC-T idzi dzine chekuita nekupondwa kwavamutedza.
Asi mutauriri webato iri, VaDouglas Mwonzora, vanoti hurumende iri kuita zvematongerwo enyika ichiyedza kutyisidzira vechidiki vebato iri kuti vasapinde munyaya dzezvematongerwo enyika vachiti hapana kana humbowo hwakati tsvikiti.
VaAlec Muchadehama vanoti vanofunga kuti vane mukana wekuwanira nhengo dzeMDC-T idzi mukana wekubvisa mari yechibatiso.